Nyanzvi Yekuratidzira "Ryuko Kawabata's Institution Exhibition Era Seye Nyowani Nyowani Nyowani Mukupenda" | Ota Ward Tsika Yokusimudzira Sangano
Chiratidziro chehunyanzvi "Seye nyowani nyowani nyeredzi munguva yeKawabata Ryuko's institute kuratidzira"
Ryuko Kawabata (1885-1966) akabuda semupendi wechiJapanese nekuratidzira paRumutsiriro Nihon Bijutsuin (Institute Exhibition), iyo yakagara nhaka mweya waTenshin Okakura ikamutsidzirwa naTaikan Yokoyama nevamwe. Yakanga iri nguva. Paakasarudzwa kekutanga ku 1915nd Reconstruction Institution Exhibition muna 2, akakurudzirwa nemunhu mumwecheteye gore rakatevera, uye Ryuko akakwezva kutaridzika semupendi anouya uye akadaidzwa "nyowani hofori nyeredzi kupenda danho ".
Mukuratidzira uku, Ryuko akazova mupendi wechiJapanese uye akadhirowa yekutanga "njanji yekuyambuka" (yakaiswa mumyuziyamu muna 1914). Zvisinei, mabasa enzvimbo yekuratidzira yeRyuko yakaitwa nemuseum kusvika 1928, paakasiya chikoro kuratidzira, kucharatidzirwa kamwechete.
"Aun" (1918), iyo inoratidzira shumba mbiri dziine shinga yekurova brashi iyo izere nehudiki, "Shirahi Yume" (1919), iyo inoratidza zvine mutsindo maitiro ekuMadokero, uye "Moto", izvo zvakakonzera kugadzirwa kwe Kuwedzera kumabasa akadai se "Hupenyu" (1921), iyo huru-skrini trilogy "Apostle Gyosan" (14), "Ichiten Gomochi" (1926), uye "Kamihen Daibosatsu" (1927), ayo anopedzisa iyo 1928 -yeye mwaka wesangano rekuratidzira. Ndokumbira kuti uone Ryuko's ambitious yekuJapan yekupenda kugadzirwa mumakore epakati kuburikidza nemabasa akadai saXNUMX).
Kubvumbi 3 (Sat) -July 4 (Zuva), gore rechitatu reReiwa
Vakuru (vane makore gumi nematanhatu zvichikwira): yen 16 Vana (makore matanhatu zvichikwira): 6 yen
Ryuko Kawabata "Moto" 1921, Ota Ward Ryuko Memorial Museum Unganidzo
Ryuko Kawabata << Apostle's Sanctuary >> 1926, Ota Ward Ryuko Memorial Museum Ungano